Ujyaalo Sandesh | » संसार हेर्ने धोको संसार हेर्ने धोको – Ujyaalo Sandesh
१६ फागुन (बझाङ)
साइपाल गाउँपालिकाकी दृष्टिविहीन एक किशोरीले उपचार पाउन सकेकी छैनन् । जिल्लाको अन्तिम मानव बस्तीको रुपमा रहेको साइपाल गाउँपालिका–४ धुलीकी पिउली कुमारी रोकाया आर्थिक अभावमा उपचारबाट वञ्चित भएकी हुन् ।
‘अहिले अँध्यारो र उज्यालो छुट्याउन सक्ने त भएकी छे,’ गंगारामले भने, ‘सधैं धनगढी जान पैसा भएन । गाउँमा कसैले ऋण पत्याउन सक्ने मेरो हैसियत पनि छैन । त्यसैले उपचार छोडेको हुँ,’ खर्च अभावका कारण उपचार रोकिएको भए पनि छोरीले गर्ने प्रश्नले बेचैन हुने गरेको उनले बताए । ‘बुवा आमाको अनुहार कस्तो छ ? रातो कस्तो हुन्छ ? गाडी कस्तो हुन्छ ? भनेर सोधी राख्छे,’ उनले भावुक हुँदै भने, ‘यसलाई संसार हेर्ने रहर छ । गरिबीले मैले बाबु हुनुको कर्तव्य पूरा गर्न सकेको छैन । कोही किन्ने मान्छे भेटिए मेरै किड्नी बेचेर पनि यसको उपचार गर्ने थिएँ ।’ उपचार सम्भव भए पनि खर्च व्यहोर्न नसकेकाले मनकारीहरू समक्ष उनले सहयोगको लागि अनुरोध गरे । कान्तिपुरबाट